သတင်း -5လေဆာအမှတ်အသားစက်၏အမှတ်အသားအရည်အသွေးကိုသက်ရောက်စေသောအဓိကအချက်များ
အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုပြီးနောက်လေဆာအမှတ်အသားစက်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျဆင်းလိမ့်မည်။ ဒီအကြောင်းရင်းကဘာလဲ? လေဆာအမှတ်အသားစက်၏အရည်အသွေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအဓိကအချက်များကားအဘယ်နည်း။
1. လေဆာ marking စက်၏ focal အနေအထား
လေဆာအမှတ်အသားစက်၏အဓိကနေရာသည်အမှတ်အသားအရည်အသွေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အမြင့်ဆုံးသောစွမ်းအင်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အတွက်လေဆာလေဆာသာလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ မှန်ကန်မှုရှိ၊ မရှိ၊ ဆုံးဖြတ်ရန်အာရုံစူးစိုက်မှုသည်အပြောင်းအလဲ၏အရည်အသွေးအပေါ်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလားဆိုသည်မှာလေဆာကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်၊ လေဆာပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းလှို့မှန်ဘီလူး၏အမြင့်ကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့်လေဆာသည်၎င်း၏အင်အားအကောင်းဆုံးအခြေအနေသို့ရောက်ရှိစေသည်။ (အပြင်းထန်ဆုံးသောအခြေအနေသည်အပြာရောင် - အဖြူရောင်အလင်းကိုထုတ်လွှတ်သောလေဆာရောင်ခြည်ဖြင့်အသံနှင့်အသံကဲ့သို့သောအသံနှင့်အတူဖော်ပြသည်) ။
၂။ လေဆာရောင်ခြည်အာရုံစူးစိုက်မှု၏စွမ်းဆောင်ရည်လေဆာရောင်ခြည်အာရုံစူးစိုက်မှုစွမ်းဆောင်ချက်သည်အမှတ်အသားအရည်အသွေးကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ လေဆာရောင်ခြည်၏အာရုံသည်အလွန်နည်းသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်း၏စွမ်းအင်သည်အလွန်အာရုံစိုက်သည်။ ကောင်းသောအာရုံစူးစိုက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မပါဘဲ, သင်စံပြလေဆာအစက်အပြောက်မရနိုင်ပါ, လေဆာ၏အမြင့်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကိုမသုံးနိုင်သည်နှင့်လေဆာအမှတ်အသားစက်အောင်မြင်ရန်မရနိုင်ပါ။ အကောင်းဆုံးအာရုံစိုက်သည့်အခြေအနေတွင်ရောင်ခြည်ခါးသည်အစက်အပြောက်မှန်များနှင့်ပစ်မှတ်အကြားတည်ရှိသည်။
လေဆာရောင်ခြည်၏လှုပ်ရှားမှုမြန်နှုန်းသည်လည်းအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ လေဆာနှင့်ပစ္စည်းအပြန်အလှန်ဖြစ်စဉ်, လေဆာရောင်ခြည်၏အမြန်သည်လေဆာနှင့်ပစ္စည်းအပြန်အလှန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်လိမ့်မယ်။
လေဆာ marking စက်အအေးနည်းလမ်းလျစ်လျူရှုမရသင့်ပါတယ်။ Cooling system သည်လေဆာစက်တစ်ခုလုံးတည်ငြိမ်ပြီးရေရှည်တည်တံ့နိုင်သည့်အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ အပူသည်လေဆာရောင်ခြည်လွတ်မြောက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်သာမကဆားကစ်စနစ်၊ လေဆာလေဆာရောင်ခြည်စက်ကိုလေအအေးခံကိရိယာမှတစ်ဆင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်။ စက်ပျက်ကွက်မှုကိုလျှော့ချခြင်း၊ စက်ကိရိယာတည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်အပူဓာတ်အနည်းငယ်ဖြုန်းတီးခြင်းများရှိသည်။
လေဆာ marking ၏ 5. ပစ္စည်းများ